Microsoft Edge na-eme ka ụlọ ọrụ gọọmentị ya na Google Play | Akụkọ akụrụngwa
Agbanyeghị na Microsoft dị ka o kpebiri ịkwụsị mmepe nke Windows 10 Mobile, ebe ọnụnọ ya na-adalata n’ahịa ekwentị mkpanaka, o yighị ka ọ ga-akwụsị na mbọ ya iweta ngwa mkpanaka ya na ekwentị niile na ahịa ahụ. Offọdụ n'ime ha adịworị n'etiti ndị kachasị ebudatara na Google Play ma ọ bụ Storelọ Ahịa App, mana ugbu a ọdịda Microsoft Edge, ihe nchọgharị weebụ nke Windows 10, na ụlọ ọrụ ngwa ngwa gam akporo bụ nke gọọmentị.
Ma ọ bụ na ụbọchị ole na ole gara aga Microsoft kwupụtara ọbịbịa, na beta ụdị dị maka ụfọdụ ndị ọrụ, nke ihe nchọgharị weebụ ya na iOS na gam akporo, mana ọ were ụbọchị ole na ole maka nbudata, na gam akporo, iji mepee onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịnwale ya.
N'ezie, anyị anwalela ya, na-ebudata ya na Playlọ Ahịa Google, ihe ị nwekwara ike ime site na njikọ anyị hapụrụ na njedebe nke isiokwu ahụ. Mmetụta izizi karịrị ihe ọma, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ugbua gosipụta na Microsoft Edge bụ ihe nchọgharị e mere maka ndị na-eji ya na kọmputa dịka ihe nchọgharị mgbe niile.
Otu n'ime uru ọ na-enye anyị ka anyị chọtara ọcha na di ntakiri imewe, a mmasị na peeji nke okporo, a wuru na-QR code agụ ma ọ bụ a ọgụgụ echiche nke ahụ na-enyere anyị aka ịgụ ibe weebụ kachasị amasị anyị n'ụzọ ka mma.
Ọdịnihu nke Microsoft yiri ka ọ gbara ọchịchịrị na ahịa ekwentị, mana enwere olile anya ma ọ bụrụ na ndị sitere na Redmond na-enye anyị ngwa maka gam akporo na iOS yana lekọta ma rụọ ọrụ dị ka Microsoft Edge.
Have nwara Microsoft Edge ma?. Ọ bụrụ na azịza ya bụ eziokwu, gwa anyị ihe ị chere gbasara ihe nchọgharị weebụ nke dịlarị maka ibudata site na Playlọ Ahịa Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Microsoft Edge na-eme ka ụlọ ọrụ gọọmentị ya na Google Play